Gini mere Medium.com ji dị oke egwu maka atụmatụ azụmaahịa gị | Martech Zone
Monday, October 7, 2013 Wednesday, December 17, 2014 Ọ bụ Larry Alton
Ngwaọrụ kachasị mma maka ịntanetị na-agbanwe agbanwe mgbe niile. Iji mee ka oge ndị a guzosie ike, ịkwesịrị idobe ntị gị n'ala, bulie ngwaọrụ ọhụụ kachasị dị irè maka ụlọ ndị na-ege ntị na ntụgharị okporo ụzọ.
Atụmatụ ịde blọgụ SEO gosipụtara mkpa nke ọdịnaya "ọcha okpu" na ịkekọrịta, n'ihi ya ị nwere ike ịkwalite blọgụ azụmahịa, ikike weebụsaịtị, na Twitter iji wuo aha gị dijitalụ. Ngwa ntanetị dị ugbu a na-eweta nnukwu ụda n'ihi na ọ nwere ikike iweta ụdị ndị ziri ezi na pọtụfoliyo ịntanetị gị.
Gịnị bụ Ọkara ruo?
Free Medium.com ngwa weebụ dị ọhụrụ na ọnọdụ ahụ, ebe ọ pụtara na ntanetị na ntanetị na July 2012 mgbe ọ natara akwado site na Twitter. Ọkara bụ ọdịnaya nwere ntakịrị webụsaịtị na-ejikọ ndị na-ege ntị yana isiokwu ndị bara uru ma baara ndụ ha uru.
Ihe ntinye ederede na ederede nke edeputara na onodu bu akwukwo ndi di ndu, ya na sistemụ okwu di omimi nke na enyere ndi na - aguta akwukwo aka igosiputa isi ihe ma tinye ihe ederede. Gbalịa iji chee echiche mara mma nke atụmatụ “Track Changes” nke Okwu Microsoft na ị nwere ụdị ya.
Ihe agbakwunyere na edemede gị bụ nke onwe gị ruo mgbe ị nyochachara ha wee kaa akara maka ikwu maka ọha. Nke a nwere ike ịbụ ụzọ magburu onwe ya iji mee ka mkparịta ụka bara uru.
Mgbe Ọkara ka nọ na beta, ị nwere ike ịmalite mmalite site na ịdebanye aha maka akaụntụ efu site na iji nbanye ụlọ ọrụ Twitter gị. Nke ahụ ziri ezi: ihe niile na-agbanye Twitter na Ọkara.
A ga - ejikọ posts gị na njikwa Twitter gị, na - eme ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ịgbaso ọnụnọ mmekọrịta gị. Ndị ọrụ ọkara nke nwere ọ enjoyụ na post gị nwere ike see bọtịnụ "Kwadoro," nke ga - enyere aka bulie ya na ọkwa Medium.com.
Ndị na - agụ akwụkwọ nwekwara ike ịkekọrịta post gị na ntanetị Twitter ma ọ bụ Facebook. Comments na-kegide ha Twitter ịlesụ, otú ị nwere ike mfe soro Fans na tinye ha na-elekọta mmadụ media netwọk.
Mgbe ndị mmadụ na-ede maka Ọkara, ha anaghị eleghara ngwa ọrụ metrics anya. Otú ọ dị, onye ọrụ-enyi na enyi ha nọmba na eserese enwere ike itinye ya na mkpesa gị kwa ụbọchị.
Ozugbo akaụntụ gị mma, ị nwere ike ịga na isi menu na pịa “stats.” N'ebe a, ị ga-ahụ sistemụ eserese nke na-edekọ echiche gị niile, ịgụ ya n'ezie, yana ndụmọdụ maka ọnwa gara aga.
Onu ogugu ogugu n’enye gi otutu mmadu ole ghaghariri n’ime ihe gi iji hu ya, ma o buru na ịpachaa isi edemede ahu. Ihuenyo mbu a na-enye gị nlele zuru ezu nke ihe niile ị na-eme.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbawanye ma hụ ọnụ ọgụgụ maka ọkwa gị, pịa na aha isiokwu. Ihe eserese a ga-edozi onwe ya iji gosipụta ọnụọgụ okporo ụzọ gị maka otu isiokwu ahụ.
Enwere ike ịpị taabụ "Na-agụ" na "Recs", iji mepụta eserese eserese maka nke ọ bụla n'ime edemede ndị a. Ọ bụrụ n'ịlaghachi na nchịkọta nhọrọ, ịnwere ike ịlele ọrụ nke posts gị. Pị na ngalaba a ga-egosi gị ndepụta nke ndị kwadoro ma ọ bụ kwuo okwu na post gị, yabụ ị nwere ike ijikọ ha ma emechaa.
N'oge ahụ, ndị ọrụ nchịkọta akụkọ Medium.com ga-akpọ ndị ọrụ ka ha bido ibipụta ya na weebụsaịtị. Nwere ike ịdebanye aha maka akaụntụ Reader n'ụzọ dị mfe ma banye na ndepụta ahụ maka nnabata nchịkọta akụkọ. Jiri oge ichere iji chọọ ndị edemede ndị ọzọ n'ime niche gị, kwuo okwu banyere ihe ndị metụtara ya, ma bulie ọhụụ ụlọ ọrụ gị.
Ozugbo ị nwetara nkwenye site na Medium.com, ị nwere ike ịmalite usoro idepụta ya na mbipụta ya. Usoro ntinye ederede bu oru. Ọkara na-enye gị ohere isoro ndị otu ndị ọzọ kerịta ọrụ na-aga n’ihu, ndị nwere ike ịza ajụjụ ma nye aka na ngwaahịa gị mechara.
Tags: CMSusoro njikwa ọdịnayaajụịkọ akụkọ